Samachar Batika || News from Nepal » राती अबेर सुत्दा के फरक पर्छ ?
राती अबेर सुत्दा के फरक पर्छ ?
घर बाहिर जानु छैन । कामको च’टारो छैन । दिनभर घरमै बस्ने त हो । किन चाडै सुत्नु ? मध्यरातसम्म बसे भइहाल्छ । बिहानसम्म सुते भइहाल्छ । अहिले धेरैले गर्नसक्ने तर्क हो यो ।
एक हिसाबले ठिकै लाग्छ, ‘दिउँसो काममा जानु छैन । रातभर जागे के फरक पर्छ ? टिभी हेर्दै, फेसबुक चलाउँदै मध्यरातसम्म बस्न सकिन्छ ।’
तर, जसरी हाम्रो सुत्ने तालिका र’ डबड हुन्छ, स्वास्थ्य पनि ग’डबड हुन्छ । यसले हाम्रो नियमित सुत्ने तालिका ल’थालिंग बनाइदिन्छ । अन्य दिनमा हामी जसरी नियमित सुत्ने र उठ्ने तालिका पालना गथ्र्याैं, त्यो बि’ग्रिन्छ । र, यसको असर लामो समयसम्म रहिरहन्छ ।
अर्थात अरु बेला हामी ९–१० बजेभित्र सुत्ने गथ्र्यौं । त्यही समयमा झ्याप्प निद्रा लाग्थ्यो । बिहान ५–६ बजे निद्राले छाड्थ्यो । ज्यान चंगा हुन्थ्यो । सबै काम नियमित हुन्थ्यो ।
तर, जब राती सुत्ने तालिका मिल्दैन, दिनचर्या नै बिग्रिन्छ । न खाने समय मिल्छ, न काम गर्ने । यसरी जथाभावी खाने, बस्ने र काम गर्ने शैलीले स्वास्थ्यमा हा’नी गर्छ ।
राती अबेरसम्म बस्ने । बिहानभर सुत्ने बानीले मधुमेहको जो’खिम बढाइदिन्छ । टाइप २ मधुमेह, उच्च रक्तचाप जस्ता दीर्घ रोग लग्ने संभावना अधिक हुन्छ ।
चिकित्सकका अनुसार राती ढिलो सुत्ने व्यक्तिमा गलत खानपानको बानी बस्छ । त्यसले मोटोपन र मुटु रोगको समेत समस्या निम्त्याउँछ ।
ग्लुकोजको स्तर ग’डबडी
सामान्यतया, शरीरमा ग्लूकोज राती न्युन स्तरमा रहने गर्छ । तर, ढिला गरी सुत्ने व्यक्तिहरु राती खानेकुरा, मदिरा, चिया, कफीको तलतल लाग्छ । केही न केही खान्छन् । यसरी खानाको कारण रगतमा ग्लुकोजको स्तर बढ्न पुग्छ । यसले टाइप २ मधुमेह हुने जो’खिम बढ्छ ।
राती अबेरसम्म बस्ने । बिहान ढिलो उठ्ने । यसले खानपान शैली नराम्ररी प्रभावित हुन्छ । कतिबेला खाने भन्ने टुंगो हुँदैन । यसरी शरीरको आवश्यक्ता अनुरुप खानपान तालिका मिल्दैन । यसले शारीरिक कमजोरी र रोग निम्त्याउँछ ।
विहान अवेरसम्म सुत्नुको असर दिमाग तथा हर्मोनमा समेत पर्ने गर्छ । यसले चिन्ता र दुःखको भाव गराउँछ । यस्तै उनीहरुमा छ’टपटी र बे’चैनी समेत पै’दा हुन्छ ।
यसको कारण के हो भने मानव शरीरमा एउटा चक्र हुन्छ, जुन २४ घण्टाको एक च्रकमा चल्छ । यही जैविक घडीले शरीरका कार्य सम्पादनलाई नियमित र नियन्त्रित राख्छ ।
कतिसम्म भने मानिसलाई कुन बेला खाने र कुन बेला सुत्नेसम्मको जानकारी पनि जैविक घडी अनुरुप नै हुन्छ । राती अबेर सुत्ने बानीले जैविक घडी अनुरुप शरीरको कार्य सम्पादन हुँदैन । त्यसले शरीरमा ख’राब अ’सर पर्छ ।
प्रकाशित मिति २९ चैत्र २०७६, शनिबार १२:४४